FARMAAJO “Inta Geelle uu madaxweynaha yahay inaga 4-M.W iyo 12-RW ayaa na soo martay..”. | gobolada.com
Mar 19, 2019 - jawaab
Isagoo niyadda ka jabinaya madaxweynihii hore Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kuna caanbaxay halkudhigii (Qabyo ninkeedaa dhameestira) kuna sugnaa furitaanka safaaradda Jabuuti ayuu Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo oo qudbad ka jeediyay halkaasi waxa uu yiri.
“4-Madaxweyne iyo 12-Ra’iisul Wasaare inta aan mareyno waxaa wali Jabuuti Madaxweyne ka ah Ismaaciil Cumar Geelle, taasina waa siyaasad xasilooni ku jirta”.
Intaas markii afkiisa soo dhaaftay ayaa Xasan Sheekh Maxamuud oo aad u dhibsanaya hadalka u muuqda midka xanafta wata, isla markaana sida muuqata Farmaajo uu ku doonayo 2021 in uu ereyo bixin cusub ku bilaabayo ereyga ah Xasilooni siyaasadeed oo uu u isticmaali rabo in uu ku sii heysto madaxtinimada dalka ayuu mar un soo fiiriyay, hase yeeshee Farmaajo ayaa ka xeeladeystay eegmada Xasan Sheekh oo dhinac kale u jiheystay.
Xafiiska Madaxweynaha waa xil aad u macaan dadka soo marayna lagama maro ilaa ay gaaraan heer ay ku dhacdo hurda yari, welwel iyo afar sano oo noqota wax aad u yar, laakiin inta ay xilka hayaan qofka waxbadan ayaa ka daahran, kuwaasi oo u muuqda marka uu xafiiska bannaanka ka joogo.
Xasan Sheekh oo aan wali ka quusan xilka ayaamihii nasiibka saacidayna uu ka muuqday dhego adeyg ayaa iminka haya wax badan oo markii uu xafiiska joofay uu ka diiday dad aad ugu dhawaa.
Haddaba ereyga soo kordha marka doorasho la sugayo waxaa ka mid ah in Xasan Sheekh uu keenay (QABYO NINKEEDA DHAMEYSTIRA) halka Farmaajo uu soo kordhiyay xasilooni siyaasadeed, intaba kalmadaasi waxa ay isugu jiraan dano siyaasadeed iyo kuwa gaar ah.
Madaxweyne Farmaajo oo dadka sida gaarka ah u yaqaana ay ku tilmaamaan nin aad u wanaagsan ayaa waxa ku xeeran Canaasiir diidan in shaqsiyada Farmaajo uu yahay sidii lagu yaqiin taas oo bixineysa tafaasiir nooc kale ah.
Ugu danbeyntii Farmaajo ayaa u muuqda mid rajo fara badan ka qaba in uu soo laabto sida ku cad kalmada cusub ee xasilooni siyaasadeed oo uu ula jeedo in mar kale xilka faraqa loogu shubo, midaasina waa wax maqan oo aan la saadaalin Karin, ayna adag tahay inay mar kale u rumowdo.
W/Qoray: Saalax Nuur Cali (Saalax-Dheere).